नयाँ ल्यापटप किन्न चाहनुहुन्छ? यी सुझावहरू अपनाएर तपाईं सजिलैसँग चयन गर्न सक्नुहुनेछ - Technology Khabar
» टिप्स » नयाँ ल्यापटप किन्न चाहनुहुन्छ? यी सुझावहरू अपनाएर तपाईं सजिलैसँग चयन गर्न सक्नुहुनेछ
नयाँ ल्यापटप किन्न चाहनुहुन्छ? यी सुझावहरू अपनाएर तपाईं सजिलैसँग चयन गर्न सक्नुहुनेछ
Technology Khabar २८ मंसिर २०७८, मंगलवार
स्थानिय पसलमा ल्यापटप हेर्दै ग्राहकहरु । फाइल फोटो
यदि तपाई नयाँ ल्यापटप किन्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा ठूलो समस्या कुन ल्यापटपमा फिट हुने र त्यसलाई कसरी फाइनल गर्ने भन्ने हो । त्यसैले तपाईलाई यस समस्याबाट बचाउनको लागि, हामी तपाईलाई ल्यापटप किन्नु अघि छनोट गर्न सजिलो बनाउने केहि चीजहरू बताइरहेका छौं।
ल्यापटपहरू स्मार्टफोनहरू भन्दा फरक रूपमा बनाइन्छ र बेचिन्छ। तसर्थ, यसलाई किन्नु अघि, यो केहि विषयहरुको बारेमा थाहा पाउनु उपयुक्त हुन्छ । जसले तपाईँलाई सहि ल्यापटप किन्न सजिलो बनाउँछ।
केहि वेबसाइटहरूले नयाँ म्याकबुकलाई किन्नको लागि उत्तम ल्यापटपको रूपमा सूचीबद्ध गर्दछन्, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले ल्यापटपका लागि धेरै रकम खर्च गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाइँ ल्यापटप किन्न ५० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाइँको खोजलाई त्यो श्रेणीमा सीमित गर्नुहोस्। यस दायरामा पनि धेरै राम्रा र स्तरीय ल्यापटपहरू फेला पर्नेछन् जसले तपाईंलाई निराश पार्दैन।
सबैभन्दा पहिले तपाईँले ल्यापटप किन किन्दै हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट हुनुहोस्। ल्यापटपका कामहरू (जस्तै टाइप गर्ने, फाइलहरू भण्डारण गर्ने, ब्राउज गर्ने, अनलाइन कक्षामा सहभागी हुने, चलचित्रहरू हेर्ने, आदी) गर्नका लागि मात्र तपाईंलाई ल्यापटप चाहिन्छ भने सामान्य विन्डोज ल्यापटप यसको लागि राम्रो विकल्प हुनेछ। यदि तपाइँ गेमहरू खेल्न चाहनुहुन्छ भने, गेमिङ ल्यापटप कोटीमा हेर्नुहोस्। कलेजका लागि ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो ब्याट्री लाइफ र धेरै भण्डारण भएको ल्यापटप छान्नुहोस्।
अपरेटिङ सिस्टम छान्नुहोस्
तपाईं बजारबाट विण्डोज, लिनक्स र म्याकओएस चल्ने ल्यापटपहरू किन्न सक्नुहुन्छ। तर, आफूलाई उपयुक्त हुने एउटा मात्र अपरेटिङ सिस्टम रोज्नुहोस्। यदि तपाइँ विन्डोज ल्यापटपको साथ सहज हुनुहुन्छ भने, विन्डोज किन्न सल्लाह दिइन्छ। अचानक म्याकबुक वा लिनक्स पिसीमा स्विच गर्न असहज हुन सक्छ र त्यसमा अनुकूल हुन र बानी पर्न लामो समय लाग्न सक्छ।
आफ्नो प्रोसेसर चयन गर्नुहोस्
ल्यापटपमा नयाँ ११ औं जेनेरेसन इन्टेल कोर आई ९ हुनु आवश्यक छैन् । यो तपाईको अफिसको काम वा टाइपिङ कार्यको लागि एक अत्यधिक स्पेसिफिकेसन हुन सक्छ। त्यसैगरी, यदि तपाइँ गेमहरू खेल्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले कम्तिमा एक इन्टेल कोर आई ५/एएमडी रेजन ५ प्रोसेसर भएको पिसी चयन गर्न आवश्यक छ। तर अनलाइन कक्षाका लागि मात्र चाहनुहुन्छ भने कोर आई ३ प्रोसेसर पनि ठिक हुनसक्छ। इन्टरनेटमा हेर्नुहोस् र कुन प्रोसेसर तपाईको आवश्यकताको लागि उत्तम छ भनेर अनुसन्धान गर्नुहोस्। उदाहरणको लागी, कोर आई ५ पीसीमा सबैभन्दा राम्रो अलराउन्डर विकल्प हो।
सन् २०२२ को सुरुमा, चीजहरू सहज रूपमा चलाउनको लागि तपाइँलाई तपाइँको विण्डोज ११ ल्यापटपमा कम्तिमा ८ जीबी र्याम चाहिन्छ। त्यसैगरी, गेमरहरूलाई आफ्नो प्रणालीलाई भविष्यमा प्रमाणित गर्न (फ्यूचर-प्रूफ) कम्तिमा १६ जीबी र्याम चाहिन्छ।
कहिलेकाहीँ अनौठो लाग्छ किन १ टेराबाइट (टिबी) भण्डारण भएका केही ल्यापटपहरूको लागत कम हुन्छ भने केही २५६ जीबी भण्डारण मात्र भएको ल्यापटपको मूल्य बढी हुन्छ? एपहरूको छिटो लोडिङ र छिटो बुट गतिलाई अनुमति दिन अब ल्यापटपहरू एसएसडी भण्डारणमा स्विच गर्दै छन् । एसएसडी टेक्नोलोजी महँगो भएकोले, तपाईंले अन्तमा धेरै कम सम्भावनाहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। एचडीडी भण्डारण यो सस्तो भएपनि चलाउँदा सुस्त हुन्छ तर यसैले, अधिक क्षमता प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं थप भण्डारण चाहनुहुन्छ भने, एसएसएचडी (SSHD) भण्डारणको साथ मोडेल जाँच गर्नुहोस्, जसले तपाईंलाई बुटअप गतिमा धेरै सम्झौता नगरी ठूलो भण्डारण ठाउँ दिन्छ।
हेर्दा वा बोक्नका लागि कम्प्याक्ट १३ इन्च ल्यापटपहरू राम्रो देखिन्छन्, तर तिनीहरू तपाईंको दैनिक कार्यालयका कार्य आवश्यकताहरूको लागि पर्याप्त नहुन सक्छन्। जस्तै, कलेज वा अफिसमा १६ इन्चको गेमिङ ल्यापटप लैजानुको कुनै अर्थ छैन। त्यसोभए शोरूममा जानुहोस् र हेर्नुहोस् कुन साइज तपाईंको लागि उपयुक्त हुन्छ। तिनीहरूलाई उठाउनुहोस् र हेर्नुहोस् कि तिनीहरूले तपाईंको हात वा काँधमा धेरै बोझ राख्छन्। यसका साथै ल्यापटपको तौल पनि हेर्नुहोस् । गेमिङ्ग ल्यापटपहरु भारी हुन्छन भने प्रोफेसनल ल्यापटपहरु तौलमा हलुका हुन्छन्।
यो विषय भनेको केहि दिनको लागि ल्यापटप प्रयोग नगरी तपाईले जाँच गर्न सक्नुहुन्न। तर, जान्नुहोस् कि प्रोसेसर जति शक्तिशाली हुन्छ, त्यति नै छिटो यसको ब्याट्री लाइफ समाप्त हुन्छ। यो डिस्प्ले रिजोल्युसन र ब्राइटनेसका साथै कूलिङ गियरमा निर्भर गर्दछ। त्यसैगरी ल्यापटपमा भएको ब्याट्री टेक्नोलोजी र साइज वा सेलमा पनि भर पर्दछ। यसका साथै ल्यापटप कति समयसम्म चलाउनुहुन्छ त्यसमा पनि आधारित हुन्छ। आजभोली बजारमा कम्तिमा २ घण्टा ब्याट्री ब्याकअप दिने ल्यापटपहरु उपलब्ध छन्।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७८, मंगलवार
अनलाइन बैंकिङ्ग वा मोबाइल बैंकिङ्ग गर्नुहुन्छ ? त्यसोभए यसरी ससक्त बनाउनुस् आफ्नो पासवर्ड
निरन्तर भईरहेको वर्षाबाट यसरी जोगाउनुस् आफ्नो मोबाइल फोनलाई, हेर्नुस् उपायहरु